ဆော်ဒီ ဝဟာဘီ အစိုးရ မှ ဆော်ဒီရှီအာ မွတ်စလင်မ် ၃၇ ဦးအား ခေါင်း ဖြတ်ကွပ်မျက်အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
ဧပွီ ၂၄, ၂၀၁၉ - ၉:၃၀ ညနေ News Code : 938222 Source : ABNA Link:
အဗ်နာ သတင်းဌာန ၏ သတင်းအထောက်အထားအရ ဆော်ဒီ ဘုရင် အမျိုးအနွယ်များမှ ရှဟီးဒ် ရှိက်္ခ နေမေရ် ၏ လမ်းစဉ် နောက်လိုက်သူ ၃၇ ဦးအား သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် ၃၇ အား ခေါင်းဖြတ် ကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ် ။
ဤ ၃၇ ဦး စလုံးအား ရှီအာများနေထိုင်သည့် အလ်ကသီးဖ် ဒေသမှ ဆော်ဒီ စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း အပြစ်မဲ့ ၃၇ဦးလုံးကို ဧပြီ လ ၂၄ ရက်နေ့ တွင် သေဒဏ် ပေး ခဲ့ပါ တယ်။
၎င်း ၃၇ဦးအနက်မှ ကသီးဖ်အရပ်နေ အကျော်အမော် ရှီအာ အာလင်မ် ရှိက်္ခမိုဟမ္မဒ် အလ်အသီ ယဟ်အဗ်ဒိုလ်ဂနီးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ယနေ့မနက် ပိုင်း ရေရာဇ် မြို့တွင် ၎င်း ၃၇ ဦးအား ဆော်ဒီ အစိုးရ မှ ခေါင်းဖြတ် ကွပ်မျက်ပြီး ရက်စက်ယုတ်မာ မှု လူမဆန်မှု သမိုင်း အသစ်ကို ထူခဲ့ပေသည်။
အေပီ သတင်းဌာန၏ သတင်းအထောက်အထားအရ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ၂ရက်နောက် ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် တရက်တည်း လူဒီလောက်အများကြီးကို သေဒဏ် ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ထိုအချိန် ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင်လည်း ၄၇ ဦးအား ခေါင်းဖြတ် ကွပ်မျက်ခဲ့ ပါတယ်။ သေဒဏ် ပေးခံရသူများမှ တစ်ဦးမှာ ခါလစ်ဒ် ဗင်အဗ်ဒိုလ်ကရီးမ် အလ်သောင်ဝါရ်ဂျီ ၏ အလောင်း အား နာရီပေါင်းများစွာ ကြာအောင် သစ်ပင် အောက်တွင် ချိတ်ဆွဲပြခဲ့ ပါတယ်။ ဘယ်မြို့ တွင် သေ ဒဏ် ပေးခဲ့ကြောင်းတော့ သတင်းမသိရှိရချေ။
သေဒဏ်ပေးခံရသူများသည် ရေရာဇ် ၊ မက္ကာဟ် ၊မဒီနာ နှင့် အစီးရ် နှင့်အခြား မြို့ သားများ ပါဝင်ပါ တယ်။ သေဒဏ်ကို လည်း ဒေသ အသီးသီးတွင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆော်ဒီ အစိုးရ ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သေဒဏ် အမိန့်ခံရသူမှာ ၉၅ ဦး အထိ ရှိကြောငး သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကလည်း ၁၂၅ ယောက်အား ခေါင်းဖြတ် ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့ အတွင် အများစု မှာ မူးရစ်မှု နှင့်မှောင်ခို မှုကြောင့် ဖြစ်တယ်။ မူးရစ် ဆေးဝါး မှု ဖြင့် ပါကစ္စတန် နီ ခင်ပွန်း နှင့်ဇနီး အား ခေါင်းဖြတ် အပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နီ လုံခြုံရေး တပ်သားတစ်ဦးကို သတ်သည့် အပြစ်ဒဏ် ဖြစ် ယီမင်နိုင်ငံသား ၄ ဦး အား ခေါင်းဖြတ်ကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။
အကွပ်မျက်ခဲ့ ရှီအာ ၃၇ ၏အမည် များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရှီအာ အာဇာနည် ၃၇ဦး၏ အမည် များ ဖြစ်ပါတယ်။
أحمد حسن علی آل ربیع.
أحمد حسین علی العرادی.
أحمد فیصل حسن آل درویش.
جابر زهیر جابر المرهون.
حسین حسن علی آل ربیع.
حسین علی جاسم الحمیدی.
حسین قاسم علی العبود.
حسین محمد علی آل مسلم.
حیدر محمد إبراهیم آل لیف.
خالد حمود جویر الفراج.
خالد عبدالکریم صالح التویجری.
سالم عبدالله عوض العمری الحربی.
سعید محمد سعید السکافی.
سلمان أمین سلمان آل قریش.
طالب مسلم سلیمان الحربی.
طاهر مسلم سلیمان الحربی.
عباس حجی أحمد الحسن.
عبدالعزیز حسن علی آل سهوی.
عبدالکریم محمد الحواج.
عبدالله سلمان صالح آل اسریح.
عبدالله هانی عبدالله آل طریف.
عزیز مهدی عبدالله آل رافع العمری.
علی حسین علی العاشور.
علی حسین علی المهناء.
فاضل حسن عبدالکریم لباد.
مجتبى نادر عبدالله السویکت.
محمد حسین علی العاشور.
محمد سعید عبدرب الرسول آل خاتم.
محمد عایض محمد النملان القحطانی.
محمد عبدالغنی محمد عطیة.
مصطفى أحمد عبداللطیف درویش.
منتظر علی صالح السبیتی.
منیر عبدالله أحمد آل آدم.
هادی یوسف رضى آل هزیم.
یوسف عبدالله عوض العمری.